Epic Mitambo Inowana Rad Game Zvishandiso | Linux Vakapindwa muropa
Epic Mitambo yakazarurwa kuziviswa kwe yakatengwa neRad Game Zvishandiso (kambani yakavambwa muna 1988), RAD Game Zvishandiso yakagadzira kweanopfuura makore makumi matatu maturusi anoshandiswa nemamwe akawanda kana asinganyanyo kuzivikanwa studio, kusanganisira Epic Mitambo pachayo, kunyangwe nevatambi.
Zvishandiso izvi zvinosanganisira Blink Vhidhiyo, vhidhiyo codec yakagadzirirwa mitambo kuti muparidzi akaenderera mberi achikura pamusoro pemakore. Muchokwadi, Blink Vhidhiyo ikozvino inotsigira HDR uye inogona kusarudza 4K vhidhiyo.
Tinogona zvakare kutaura Oodle, yekumanikidza yedhata iyo inobvumira, pakati pezvimwe zvinhu, optimize kurodha nguva. RAD Game Zvishandiso zvakare inopa Telemetry, muporofita iyo inogona kubatsira nekugadzirisa, Granny 3D iyo inosangana chaizvo nechero 3D injini, uye Miles.
Epic Mitambo yakashandisa RAD tekinoroji munguva yakapfuura, kunyanya kudzvinyirira tekinoroji. Izvi zvakatendera mugadziri kuti avandudze nguva dzekurodha dzeFortnite, iri parizvino mumwe wemitambo inozivikanwa kwazvo pasirese.
Epic inotsanangura kuti semitambo inowedzera photorealistic uye vane simba, vagadziri inoda yakanakisa compression software mukirasi yayo iyo inogona kubata yakawedzera kudiwa kwedata pasina kukanganisa hunhu.
Muchidimbu, RAD timu uye tekinoroji inofanirwa kushanda pamwe nekupa zvikwata, Unreal Injini yekuratidzira, nhau uye odhiyo yekuvandudza masisitimu uye zvivakwa zvinoshandiswa nevagadziri vemitambo. Kunyangwe Epic ikozvino iine RAD, RAD ichaenderera mberi nebasa rayo razvino nevadyidzani mumitambo yekutamba, terevhizheni uye mafirimu, kusanganisira avo vasingashandise Unreal Injini mune ravo basa.
"Basa redu neEpic rakadzokera kumashure makumi emakore, uye kubatana masimba idanho rinotevera rakapihwa kuenderana kwedu nezvigadzirwa, chinangwa uye tsika," akadaro Jeff Roberts, muvambi uye CEO weRad Game Tools.
Tight kusangana nemamota uye mapuratifomu zvinoguma nezvakanaka zviyero uye vanogadzira vanotora tsika dzakanaka. Ndosaka Epic yasvika kuna Sony uye zvinhu zvakasanganiswa muinjini yayo yeUnireal, ichiiisa senzvimbo yakazara yekusimudzira yemitambo inotevera-gen.
Hechino chirevo chaEpic nezve:
"Tinofara kuzivisa kuti Epic Games yawana tekinoroji uye bhizinesi reRAD Game Tools, kambani yemavhidhiyo software inovandudza software ine zvigadzirwa uye tekinoroji zvinoonekwa mumitambo ingangosvika zviuru makumi maviri neshanu uye inoshandiswa nemakambani emitambo makuru pasi rose, kusanganisira Epic. Pamwe chete, Epic neRAD inoronga kubatanidza hunyanzvi hweRAD tekinoroji muiyo Unreal Injini yekubatsira weanogadzira uye mutambi munharaunda.
“Segirafu mukukudziridzwa kwemitambo uye nekuwedzera kuva mafotooreistic uye ane simba, vagadziri vanoda yakanyanya-mu-kirasi compression software iyo inogona kubata yakakwira data zvido pasina kukanganisa hunhu. Nhengo dzechikwata cheRAD dzichashanda pamwe neEpic's rendering, animation, nhau uye maodhiyo matimu, kubatanidza matekinoroji akakosha uye zvigadziriso muiyo Unreal Injini uye nekunze. Simba rakabatanidzwa reRAD uye Epic rinopa vashanduri vazhinji mukana wezvishandiso zvinomhanyisa kurodha uye kurodha mumitambo yavo uye zvinopa vatambi vavo mukana wepamutambo uye wevhidhiyo.
"RAD ichaenderera mberi ichitsigira vayo vanobatirana navo mumitambo, indasitiri yemafirimu neterevhizheni, nekutengesa uye kusimudzira bhizinesi timu iyo ichachengetedza nekupa marezenisi zvigadzirwa zvayo kumakambani mumaindasitiri ese, kusanganisira iwo asingashandise Unreal Injini.".
Kim Libreri, CTO weEpic Mitambo, akataura nezve kuwanikwa:
Isu tinoziva pachezvedu kuti inoyevedza sei RAD yekumanikidza tekinoroji iri, tamboishandisa iyo kugadzirisa nguva dzekutakura nekuvandudza mitambo yedu inozivikanwa kwazvo, kusanganisira Fortnite.
Chikwata cheRAD chinosanganisira vamwe vevatungamiriri vepasi rose mukumanikidza, kuvandudza vhidhiyo nemitambo, uye tinofara kuvagamuchira kumhuri yeEpic.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Epic Mitambo inowana Rad Game Zvishandiso